Andro: 6 mey 2020
Alanya Public Meat Store amin'ny serivisy
Ny ampahatelon'ny fivarotana hena ho an'ny daholobe, izay nanambaran'ny ben'ny tanànan'i Antalya Metropolitan Muhittin Böcek ny olona miaraka amin'ny hena mora sy salama ary salama, dia niditra tao amin'ny asa fanompoana tao Alanya. Naneho fahalianana manokana an'i Alanya Halk Et ny olom-pirenena nanomboka tamin'ny andro voalohany. Local [More ...]
Ny Filohan'ny TFF dia manambara ny daty voalohany amin'ny Ligy Super
Ny daty fanombohana ny Ligy Super, izay nahemotra anatin'ny ambaratongan'ny fepetra coronavirus dia nambara. Ny filohan'ny Federasiona Football Turkey Nihat Özdemir, nanambara ny ligy fa hanomboka amin'ny 12 jona izao. Hoy i Özdemir: "Ho fahavitan'ny fahasalamana be indrindra hatreto [More ...]
Miaraka amin'ny fisokafan'ny làlamby fiaran-dalamby Samsun Sivas, miverina any amin'ny toerana tena andraikiny ny mpiasa
Ny fiaran-dalamby voalohany, izay nisy ny 45166, tao amin'ny lalam-piaramanidina Samsun-Sivas Kalın, nanao ny diany voalohany niaraka tamin'ny famaky 84 ary entana 580 taonina. Ilay tsipika izay nitondra an'i Central Anatolia ho any amin'ny faritry ny Ranomasina Mainty, [More ...]
Rehefa tapitra ny Kızılırmak Street Overpass
Ny 70 isan-jaton'ny fanamboarana ny mpandeha an-tongotra an-tongotra, izay tohanan'ny Antalya Metropolitan Munich izay manohy ny fanamboarana eo amin'ny lalana Kızılırmak, dia vita. Ny overpass dia mikasa ny hisokatra amin'ny volana Jona. Antalya Metropolitan kaominina, lalana azo antoka amin'ny mpandeha an-tongotra [More ...]
Fanohanana ny fahadiovana ho an'ireo mpivarotra basy sy mpandrafitra volo eto an-drenivohitra
Ny ben'ny tanànan'i Ankara Metropolitan Mansur Yavas, izay manohana hatrany ireo matihanina very asa na nanidy ny asany noho ny valanaretina coronavirus, tamin'ity indray mitoraka ity, ny akora, izay hamboarina indray ny 11 mey. [More ...]
Aza mihetsiketsika eny am-pandehanana raha hitanao ity mari-pamantaran'ny fiara fitateram-bahoaka ity!
Ny kaominin'i Mersin Metropolitan dia nanao sonia tamim-pitandremana ireo fitsipika mankatò ny fitsipi-pitondran-tena izay tokony harahina noho ny valanaretina coronavirus amin'ny fitateram-bahoaka any an-tanàna. Fehin'ny minisiteran'ny Atitany ny mahazo antsasaky ny fahafahan'ny bisy [More ...]
Hihena ny fihenan'ny fiara amin'ny làlan-dàlambe maoderina amin'ny sisin-dàlana
Manambara fa ny làlana vaovao sy ny tetezana vaovao izay ahafahan'ny lalana mankany Sebahattin Zaim Boulevard mankany Serdivan dia mitohy, hoy ny filoha Ekrem Yüce, «raha manao ny dianay mankany amin'ny fitaterana izahay, dia dinihintsika ihany koa ny fahatongavan'ireo mponina ato ho ato. [More ...]
Ny bisikileta no fomba fitaterana tsara indrindra hiarovany amin'ny coronavirus
Konya Metropolitan Monisipaly, Torkia no laharana voalohany lalana bisikileta ao amin'ny tambajotra mbola hampiroboroboana ny fampiasàna bisikilety ho an'ny asa teto Konya. Ny ben'ny tanàna Konya Metropolitan Uğur İbrahim Altay, raha ny lafiny endrika ara-jeografika an'i Konya [More ...]
Fivarotan-doka an-tsokosoko nohafanaina tamin'ny fanamboarana lalamby haingam-pandeha ambony
Fivarotan-doka an-tsokosoko nohavaozina tamin'ny fanamboarana lalamby haingam-pandeha ambony. Nianjerana tao amin'ilay toerana fanamboarana tunnel "High Speed ​​Train" ilay kamiao, izay namboarina teo anelanelan'i Alifuatpaşa Sapanca. Raha ny fampahalalana azo, fiaran-dalamby haingam-pandeha amin'ny toerana misy an'i Geyve Doğançay [More ...]
Tatitra EIA momba ny orinasa an-trano fiorenan'ny fiara an-trano hatsangana any Bursa
Tiorkia Cars Initiative Group (TOGG) fiara orinasa an-trano dia ho vita tanteraka ao amin'ny 18 volana ary hamokatra ny olona roa arivo no miasa ao an-trano. Raha ny tatitra, dia mitentina 500 miliara, 22 tapitrisa amin'izany ny mpiara-miasa amin'ny orinasa. [More ...]
Ankara Sivas Fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony dia ho miasa ao anatin'ny 2020
"Hihena ny elanelan'ny faritany roa isika amin'ny 400 ora ka hatramin'ny 12 ora amin'ity taona ity," hoy ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu amin'ny tetikasa 2 kilometatra Ankara-Sivas High Speed ​​Train (YHT). na dia ny [More ...]
Mpianatra 19 Handray anjara amin'ny Program Scholarship mpikaroka anatiny ao amin'ny Covid-300
Ny fizahana ny fanombanana ny Program Scholarship Trainee Investigator (STAR) izay nambaran'ny TÜBİTAK mba hamporisika ireo mpikaroka handray anjara amin'ny tetikasa ho an'ny fitiliana ny fitsaboana sy ny fitsaboana ny valan'aretina eran-tany Covid-19 no vita. Fandraisana anjara 340 ho an'ny programa [More ...]
Sidina AKakitaUR SİHA Nandritra ny fizahana ny lalan'ny fifamoivoizana an'ny minisitra Soylu
Ny minisitry ny atitany, Süleyman Soylu dia nanao fizahana tany amin'ny biraon'ny boaty Kahramankazan tao Ankara, teo amin'ny toerana fampiharana ny fifamoivoizana. Ny sidina AKakitaUR SİHA dia tsy voamarika nandritra ny fizahana ny minisitra Soylu. AKakitaUR, izay antenaina fa hatolotra ny mpitandro ny filaminana amin'ny fiandohan'ny 2020 [More ...]
Mihoatra ny 1300 lozisialy fandefasana radio miorina amin'ny ASELSAN mankany TAF
Fifanekena iray antsoina hoe "TAF Multi-Band Digital Joint Radio Supply" dia nosoniavina teo amin'ny ASELSAN sy ny Dirte de lindustriire Defense (SSB) mba hahafahana manatanteraka ny paikady sy stratejika an'ny Tafika Tiorka (TSK). [More ...]
Export ny fitaovam-piadiana fanafody lavitra avy any ASELSAN mankany Bahrain
ASELSAN, iray amin'ireo orinasa ambony amin'ny sehatry ny fiarovana iraisam-pirenena sy ny teknolojia, dia nanao sonia fifanarahana vaovao ho an'ny fanondranana rafitra fitaovam-piadiana lavitra ho an'ny fampiasana ny tafika Bahrain. Tratra tamin'ny taona 2019 [More ...]
Fanohanana ASELSAN amin'ireo zana-tsoratry ny faritra moderna
Mifanaraka amin'ny fifanarahana nosoniavina teo amin'ny Mpanolo-tsaina momba ny indostrian'ny fiaramanidina fiarovana sy ASELSAN, ny hetsika fanohanan'ny logistika mitambatra dia hotanterahina any amin'ireo faritra misy azy mandra-pahatongan'ny faran'ny taona 2022 ao anatin'ny sehatry ny Tetikasa Fototry ny Modular Temporary. Faritra base azo ampiasaina [More ...]
TÜBİTAK maka mpiasa maharitra 9 hiasa ao Kocaeli. Misy fepetra manokana takiana amin'ny mpangataka. Ny fampiharana dia tsy maintsy atao ny 27 May 17.00:XNUMX amin'ny farany. Natao tamin'ny alàlan'ny "Rafitra fampiharana" [More ...]
Sinton'ny Gün Sayan Sivas Ankara High Speed ​​Train line
Ny tetik'asa fanamboarana haingam-pandeha ambony indrindra ao Ankara-Sivas, izay hampihena ny fitaterana eo anelanelan'i Sivas sy Ankara mandritra ny 2 ora dia tonga mifarana. Sivas Governora Salih Ayhan dia nilaza hoe, «Fantatrao fa misy asa frenetika amin'ny tetikasan'ny fiarandalamby haingam-pandeha. Fianarana miaraka amin'ny coronavirus [More ...]
Fiofanana momba ny antony manosika ho an'ny mpiasa manana fahazoan-dàlana mitantana avy amin'ny İletişimPark
TransportationPark, iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka ao amin'ny Kaominina Kocaeli Metropolitan, dia nanolotra fanazaran-tena manentana lavitra miaraka amin'ny mpizara maha-olombelona ho an'ny mpiasa izay manana fialan-tsasatra ara-panjakana any an-tranony noho ny valan'aretina coronavirus (Covid-19). Amin'ity fiofanana omena mpiasa miisa 115 ity, [More ...]
Raharaha ISPARK Nolavina tao amin'ny Terminal Bus Bus Istanbul!
Ireo mpandraharaha taloha tao amin'ny Great Istanbul Otagarı, ny toeram-piantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka, İSPARK AŞ. Nolavin'ny tribonaly ny fitsipiky ny fitoriana momba ny fanapahan-kevitry ny fivorian'ny IMM. 25 amin'ireo toeram-piantsonan'ny Grand Istanbul Otagarı [More ...]
Ny valan'aretina miady amin'ny Coronary dia niteraka fatiantoka lehibe tamin'ny sehatry ny fizahantany
Noho ny fepetra noraisin'ny Covidien fetra ny 19 ivelany nivezivezy fanakatonana Istanbul, Torkia na ny fizahan-tany no niova be ny mahay mandanjalanja. Ny isan'ny mpizahatany tonga tany Istanbul tamin'ny volana martsa raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa [More ...]
Tanjona ny hanomezana ny mpamboly sy ny mpamokatra ny vaovao ilain'izy ireo amin'ireo horonantsary sy horonantsary fampiofanana izay havoaka amin'ny Internet, ny dingana voalohany amin'ny "Forest Forest Academy" dia ny minisitry ny fambolena sy ny ala. Bekir Pakdemirli nanome. ny mpamboly [More ...]
Ny kaominina ao amin'ny Eskişehir Metropolitan, izay nametraka fampiasam-bola lehibe tamin'ny fitaterana an-tanàn-dehibe, dia tonga teo amin'ny tsipika làlambe avy ao amin'ny Hopitaly City ka hatrany amin'ny Faha-75 an'i Yıl Neighborhood sy ny Opera amin'ny alàlan'ny Kumlubel. [More ...]
Torkia Cyber ​​Security Cluster Mitohy ny Online Education
Naorina in SSB fiahian'ny Cyber ​​Security Cluster Torkia, Torkia ny tserasera-19 Covidien haingana aza tapahina ny teniny ny fanabeazana mitohy mba hampianarana ny manam-pahaizana amin'ny aterineto. Filohan'ny indostrian'ny fiarovam-pirenena. Dr. İsmail Demir, [More ...]
Nanambara ny vadin'ny minisitra ..! Fitohizan'ny liga TFF
Minisitry ny fahasalamana Fahrettin Koca, Torkia Football Federation (TFF) efa nihaona ny Ministeran'ny Fahasalamana Filohan'ny Nihat Özdemir. Ao anatin'ny fanambarany, ao anatin'ny fepetra fandraisana ny valanaretina, dia afaka milalao lalao baolina kitra tsy misy mpijery intsony. [More ...]